दृष्टिकोण – Page3– Tesro Ankha
राजु राई तँ मानवजीवनको अमूल्य अर्थ नबुझ्ने, समस्यासँग जुध्न नसक्ने संसारकै काँतर र तुच्छ मानिस होस् । र, त आत्महत्या गर्ने सोच तेरो दिमागमा आउँदै छ । संसारमा धेरै मानिस अपाङ्गता भएका दुव हात खुट्टा नभएका विभिन्न समस्यासँग जुध्दै अरूलाई हौसला दिएर शानसाथ बाँचेका छन् । कोठीमा बेचिएका बल्लतल्ल नरकीय जीवनबाट उम्किएर आफूलाई बेच्ने दलाललाई सजाय दिलाएर, त्यस्तै अरू महिलाको उद्धार गरेर शानसाथ बाँच...
Lekth Nath Pandey Background Concept of mass communication has established first half of the 19th century. While news media, especially newspapers have gone in mass circulation; the word “mass” coined. It was the time when penny press came into existence in 1830s. Yellow Journalism of late 19th century further proved it. While newspaper has become mass circulation in the western wo...
राजुविक्रम चाम्लिङ बीसौं शताब्दीको विश्वसमाज, विकासलाई आधार मानेर लम्केको छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीको समाज भने विकासमात्र होइन, पहिचानसहितको विकासमा अगाडि बढिरहेको छ । चाहेर होस् वा नचाहँदा पनि विश्वसमाजले अभ्यासमा ल्याइरहेका छन् । सबै समाजले विकाससँग पहिचान स्थापित गर्न थालेका छन् । पहिचानविनाको विकासको अर्थ रहँदैन । यसको प्रभाव विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा जाती...
राजकुमार दिक्पाल नेपालका सीमान्तकृतसँग मिडियाको कुरा गर्दाखेरी कि त उनीहरूले मिडियाबारे बुझेका हुँदैनन्, कि त अर्कैतिर मुन्टो फर्काउने गर्छन् । उनीहरूको भनाइ हुन्छ, ‘हाम्रो कुरा मिडियाले उठाउँदैन के कुरा गर्नु ?’ नेपालका सीमान्तकृत वर्गका आवाज उठाउने कतिपय नेताहरूसँग मेरो पनि सम्पर्क छ । उनीहरूको जवाफ पनि त्यस्तै हुन्छ । हामी काठमाडौंमा छौं केही सीमान्तकृतको आवाज उजागर गर्नुपर्छ भन...
दीपक खनाल नेपाली पत्रकारिताको अहिलेसम्मको जग ‘भन्नुभयो’ नै हो । फलानो नेताले यसो भन्यो, उसो भन्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्नु नै अहिलेसम्मको नेपाली पत्रकारिताको विशेषता हो । विषयवस्तु पनि यही नै हो । हाम्रो पत्रकारिता घटनामुखी छ, खोजमूलक छैन । भएको कुरा लेखिन्छ, हुने कुरा कहिल्यै पनि लेखिँदैन । ठूला लगानीका मिडियाले कहिल्यै पनि जनताका पक्षमा पत्रकारिता गर्न चाहँदैनन्, आफ्नै पक्षमा मात्र प...
डा. दीपेन्द्र रोकाया बिहानभरि सिमसिम पानी प¥यो । निथु्रक्कै भिज्याँै । झार जंगलले कोरेर जिउ पोल्न र चिलाउन थाल्यो । दूधकोसी किनारैकिनार चार घन्टा हिँड्दा पनि पिउनेपानी पाइएन । तिर्खा निकै लाग्यो । यस्तो बेला सुनकोसी नजिकै बगेको छ भनेर मात्र के गर्नु ? चिप्लियो भने कोसीले बगाउनेवाला छ । जोखिम उठाएर पानी पिउन जाउँ भने बाढी आएकाले पानी धमिलो छ । वास्तवमा नेपालमा स्रोत सम्पदाको कमी होइन तर त्यस...